Ataoko ho fonenako ianao | Fondation des Choisis de Jésus
Ataoko ho fonenako ianao
3A_03: Ry Bitikako, nomena fahefana ianao hatsapa ny fisiako ao aminao na dia eny ampanaovina ireo raharahanao aza ianao. Ataoko ho fonenako ianao ! Mirehi-pitiavana ho anao Aho ! Sokafy fotsiny ny tànanao handray Azy. Tena eo Aho, ao anatinao.